Mpempe akwụkwọ: Ihe ọgụgụ isi na mmekọrịta mmekọrịta | Martech Zone
Thursday, January 10, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ịnwere ike izipu onyonyo na webụsaịtị gị ma ọ bụ blọọgụ gị, mee ka ha na ha nwee mmekọrịta, ma jiri ojiji na tagging soro ha gaa ka ha si na saịtị gị depụtaghachi ma chekwaa na nke ọzọ? Nwere ike ime nke a ugbu a Ibepu. Stipple na-emekwa ka ozi ojiji site na ha nchịkọta ngwugwu. Mouseover oyiyi n'okpuru ịhụ Stipple ke edinam!
You nwere ike ịhụ mkpado mmekọrịta m gbakwunyere na onyonyo nke ọfịs anyị - nkewa, Facebook, Twitter na ọbụlagodi ebe ị nwere ike ịzụta akwụkwọ m. Otu n'ime ihe m kwenyere na enwere ike iji Stipple mee ihe n'ụzọ dị irè site na ntanetị ahịa bụ mbipụta infographics! Inwe ike itinye mgbakwunye ma soro ojiji nke infographic ga - enyere aka na ahịhịa ọ bụla.
Nkpado na njikwa njikwa n'efu ma wuo ya dika ngwa nke ndi mmadu.
Nke a bụ nkọwa vidiyo nke teknụzụ:
Ibepu nwere plugins mepụtara maka WordPress na usoro njikwa ọdịnaya ndị ọzọ iji mekọrịta na ịpị ihe oyiyi na akpaghị aka na blọọgụ gị.
A ga-eji stipple mee ihe oyiyi si na Onyinye Nhọrọ Movie Critics. Na mmekorita ya na NDỊ, Fans nwere ike inyocha ma zụọ ahịa 'Ihe nkiri na ejiji' nke kapeeti uhie site na Ndi mmadu.com na-ekpuchi mkpuchi Critics Choice Movie Awards. Teknụzụ mmekọrịta Stipple ga - enyere ndị egwu aka ịmụtakwu banyere kpakpando, ihe nkiri ha na ụdị ha. A ga-eme nhọpụta Movie Critics 'na Thursday, Jenụwarị 10, na 8pm EST. Ihe nkiri ahụ na-acha uhie uhie na-amalite na 6pm EST.
Tags: nchịkọta ihe oyiyioyiyi calloutsnkpado ihe oyiyiojiji ihe oyiyistip